Global Voices teny Malagasy » Voasakana ny vohikala Blogspot any Kambodza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Janoary 2011 5:23 GMT 1	 · Mpanoratra Sopheap Chak Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Teknolojia
Araka ny hita dia fanapahan-kevitry ny governemanta io sakana io manoloana ny lahatsoratry ny KI media  tamin'ny volana Desambra izay namaritra ireo olona ambony ao amin'ny governemanta ho “mpamadika”. KI Media dia bilaogim-baovao malaza izay loza mananontanona ho an'ny governemanta.
Nitarika ny fisamborana  ny tompon'andraikitry ny Lamin'asa ara-tsakafo Maneran-tany (WFP) Seng Kunnaka koa ity tranga ity, izay voaheloka enim-bolana an-tranomaizina noho ny fanaparitahana dika mitovy ny sary mahabe resaka avy tao amin'ny KI Media. Raha maro no mizara ny hevitra hoe nandika ny fetran'ny fahalalahana maneho hevitra ny KI Media, ny fisamborana ny tompon'andraikitry ny WFP kosa dia toa tsy voamarina ary nanamarika ny fanembatsembanana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahazoam-baovao.
Mi-tweet  i ChrisInCambo (Chris Brown) :
Namaly  i john_weeks (John Weeks):
@ChrisInCambo  Ny tatitra amin'izao fotoana izao avy amin'ny mpampiasa aterineto dia manambara fa ny mpamatsy aterineto EZEcom / Metfone IHANY no nanakana ny Blogger. Fotoana ve hampiasàna mpamatsy aterineto vaovao ?
@john_weeks  Tahaka ny mitifitra ny mpampita hafatra ny fanamelohana ireo mpamatsy aterineto. Mino aho fa tsy nanao izany ry zareo ireo raha tsy nobaikoana hanao izany.
#Blogspot  sakanan'ny Ministeran'ny Atitany amin'ny fomba ofisialy nanomboka androany tamin'ny 10 ora maraina. Fotoanany mihitsy izao noho izaho manao fandalinana momba ny sivana aterineto #Cambodia 
Tao amin'ny lahatsorany momba ny Fanaraha-maso ny Blaogy 2.0 , nanoratra i Nina:
@ChrisInCambo  Tsy dia mpankafy an'i KI-Media loatra. Nefa ny fanakanana azy dia vao maika hisarika ny fifantohan-tsain'ny olona any amin'ny vohikalany, tahaka ny nitranga tamin'ny Reahu.net.
Ny Foibe Kambojiana ho an'ny Zon'olombelona  dia manao tatitra vaovao avy amin'ny Vaovao Tselatra Kambodziana (CEN):
Nanoratra ny mpampiasa Facebook iray hafa, Cheng Samnang :
Mety mbola aloha loatra izao hijerena izay hitranga aorian'ny fanakanana ireo vohikala blogspot satria mety hiova ny fanapahan-kevitra, tahaka ny trangan'ny lamin'asan'ny governemanta hanana sehatra fifanakalozana miankiana amin'ny fanjakàna mba hanaraha-maso ireo mpamatsy aterineto rehetra any an-toerana  mba hanamafisana ny fandriampahalemana amin'ny aterineto, hisorohana ny vetaveta, halatra sy asa ratsy amin'ny aterineto. Nahemotra io lamin'asa io noho ny fanoheran'ny vahoaka, eny fa na tao anatin'ny governemanta ihany aza.
Fanampim-baovao: Nitatitra ny KI Media fa efa tsy nosakanana  intsony ny vohikalany. Nandà koa ny fitondràna fa tsy nikatsaka ny hanivana ny KI Media izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/01/30/12290/
 Fanaraha-maso ny Blaogy 2.0: http://www.ninalamparski.com/Hot-off-the-press%282218012%29.htm
 Foibe Kambojiana ho an'ny Zon'olombelona: http://cchrcambodia.org/
 sehatra fifanakalozana miankiana amin'ny fanjakàna mba hanaraha-maso ireo mpamatsy aterineto rehetra any an-toerana: https://globalvoicesonline.org/2010/03/02/cambodias-great-internet-firewall/
 tsy nosakanana: http://ki-media.blogspot.com/2011/01/ki-media-is-unblocked-now.html